‘रामायण’ मा रावणको भूमिकामा प्रभास ?
मुख्य पृष्ठकला मनोरञ्जन बलिउड‘रामायण’ मा रावणको भूमिकामा प्रभास ?
विराटनगर, २ असोज । चर्चित धार्मिक कथा ‘रामायण’ निर्माण हुने भएको छ । निदेशक नितेश तिवारी अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो प्रोजेक्ट फिल्म ‘रामायण’ गर्ने योजनामा रहेका छन् । नितेशलाई रवी उदयावारले निर्देशनमा र अल्लू अरविन्द, नमित मल्होत्रा र मधु मन्टेनाले फिल्म निर्माणमा सहयोग गर्ने भएका छन् ।
फिल्म ‘रामायण’ मा बलिउड सुपरस्टार ऋतिक रोशन रामको भूमिकामा र अभिनेत्री दीपिका पादूकोण सीताको भूमिकामा रहेको चर्चा पहिलेदेखि नै चलिआएको छ । थ्रीडीमा निर्माण हुन लागिएको फिल्म ‘रामायण’ मा बाहुबली स्टार प्रभासको नाम जोडिएको छ । उनले फिल्ममा रावणको भूमिका निर्वाह गर्न आँटेको भन्ने हल्ला चलिरहेको छ ।
ऋतिक रोशन, दीपिका पादूकोण र प्रभास फिल्मको उक्त भूमिकाको लागि अनुबन्धित भएको अफवाह मात्रै भएको निर्देशकले जानकारी दिएका छन् । तर, यसको बारेमा छलफल भइरहेको छ । फिल्म ‘रामायण’ हिन्दीसँगै तमिल र तेलुगू भाषामा पनि रिलिज गरिनेछ । फिल्मलाई ६०० करोडको लगानीमा निर्माण गर्न लागिएको छ ।
कलाकारहरू सबै फाइनल भएमा यस वर्षको अन्त्यबाट फिल्मको छायांकन सुरु गरिने भएको छ । निर्देशक नितेशको फिल्म ‘छिछोरे’ बक्स अफिसमा राम्रै चलिरहेको छ । उनले ‘रामायण’ लाई राम्रोभन्दा पनि राम्रो बनाउन आफूले सक्ने हर कोशिश गर्ने बताए ।